﻿ ​नगरपालिकामा बेलको रुख रोप्ने वृद्धा
​नगरपालिकामा बेलको रुख रोप्ने वृद्धा
आइतबार १४, असोज २०७५
बिहान ९ बजेतिर इटहरी उपमहानगर परिसरमा एक जना पहेलो कपडा लगाएकी कुप्री परेकी वृद्धा सिटिरिक्सामा आउनुभयो । हातमा एउटा झोलामा बेलको बिरुवा र पानी भरिएको बोतल थियो ।
नगरप्रहरीलाई बेलको बिरुवा रोप्न आएकी हुँ, बिरामी छु धेरै बेर बस्न सक्दिन, ठाँउ देखाइदिन भन्नुभयो । नगरप्रहरीले मालीलाई बोलाएर ठाँउ देखाइदिन भनेपछि मालीले मेचीकाली पोखरीको पश्चिमी किनारमा रोप्ने ठाँउ देखाए । ती वृद्धाले बेलको बिरुवा रोप्दै भन्नुभयो, ‘धेरै फल दिनु, नगरपालिकाको जय होस ।’
ती बृद्धाले बिरुवा रोपीसकेपछि मैले सोधें, आमाको नाम के हो ?
बृद्धाले बेली बिस्तार लगाउनुभयो ‘सबैले रानीआमा भन्छन् । खास नाम चाँही श्री रानी विष्णु प्रिया खडका हो । जन्म ७९ बर्षअघि ५२ ढोका दरवार धनकुटामा भएको हो । खास घर काठमाडौ हो । अहिले इटहरीमै बस्छु । माइती काठमाडौ हो ,शाहकी छोरी हुँ । मेरा बुवा इन्द्र विक्रम शाह साइनोमा राजा त्रिभूवनका भाई पर्नुहुन्छ ।’
अहिले को सँग बस्नुहुन्छ ?
भगवान सँग ।
बिरुवा किन रोप्नुभएको ?
अक्सिजन दिन्छ नि सास फेर्न सजिलो हुन्छ । बेलको पात भगवानलाई चढाउनुपर्छ । सुन्दरहरैचा नगरपालिकामा पनि रोपेकी छु । माइ खोलामा पनि रोपेकी छु । यहाँ अस्ती फूल पनि रोपेँ । उ त्यहाँ छ अस्ती रोपेको फूल पानी हालेर आउँछु अनि तिमीले खिचेको फोटो हेरौ ल ।
फोटो हेरेपछि हाँस्दै हाँस्दै ती बृद्धा निस्कनुभयो गेटमा पुगेपछि फर्कदै भन्नुभयो ‘ए भाई बेला बेला त्यो विरुवामा पानी हाल्दै गर्नु है ।’